ဗိုလ်ချုပ်မွေးနေ့ထက် Valentine Day ကိုစွမ်းစွမ်းတမံ အကောင်အထည်ဖော်နေတဲ့ လေးစားလောက်တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်များ… | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » News » ဗိုလ်ချုပ်မွေးနေ့ထက် Valentine Day ကိုစွမ်းစွမ်းတမံ အကောင်အထည်ဖော်နေတဲ့ လေးစားလောက်တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်များ…
ဗိုလ်ချုပ်မွေးနေ့ထက် Valentine Day ကိုစွမ်းစွမ်းတမံ အကောင်အထည်ဖော်နေတဲ့ လေးစားလောက်တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်များ…
Posted by POL on Feb 14, 2011 in News | 14 comments
တကယ်က ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကို ပစ်ပယ်ချင်တာထက် အောင်ဆန်း ဆိုတဲ့ နာမည် ကြောင့် .. သူတို့ရဲ့ အတ္တကြောင့်ပါ .. ဒါနဲ့ပဲ ဗိုလ်ချုပ်ကို သိခဲ့တဲ့လူတွေ .. သိနေသေးတဲ့လူတွေ ..မေ့ပစ်အောင် ကြိုးစားနေကြတယ် .. မသိသေးတဲ့လူတွေ ဘယ်တော့မှ မသိအောင်လို့ ကြိုးစားနေကြတာပါ ..
ဗယ်လင်တိုင်း ဆိုတဲ့အတိုင်း လင်တွေ တိုင်းတာဖို့ လုပ်တဲ့ နေ့လို့ ရွဲ့လိုက်ပါရစေ
၀မ်းသာစရာကောင်းတာကတော့ ဟိုဟိုဒီဒီ ဟိုဆိုက်ဒီဆိုက်လေးတွေနဲ့ Forward mail တွေမှာ ဗိုလ်ချုပ်ကဗျာလေးတွေ ပြန်လည်ဖော်ပြလာပြီး တို့ ဗိုလ်ချုပ်မွေးနေ့ကို အမှတ်ရအောင် ကျူိးစားနေသူတွေ တွေ့လာရတာပဲ။
၀မ်းနည်းစရာကောင်းတာက တစ်ချိူ့လူငယ်တွေကတော့ ဗိုလ်ချူပ်မွေးနေ့ဘယ်နေ့မှန်း သိကြပုံတောင်မရပါဘူး။ စကားမစပ် ခု ကျောင်းသင်ခန်းစာထဲမှာ အဲဒီ အောင်ဆန်းဇာနည် ကဗျာလေး ပါသေးရဲ့လားမသိဘူးနော်။
မနေ့က လက်ဆောင်ခြင်းပေးစရာရှိလို့ သွား ၀ယ်ပါတယ်တော်… ရှောပင်းစင်တာမှာ ဗယ်လင်တိုင်းဒေးအတွက် အကြီးကျယ်ကိုပဲ ကောင်တာဖွင့်ပြီးရောင်းနေတာ … ။ ကောင်လေးတွေ ၊ ကောင်မလေးတွေကလည်း ၀ယ်လိုက်ကြတာ ခြင်္သေ့တွေ ၊ ဆင်တွေ တရွတ်ရွတ်ထွက်သွားတာမြင်လိုက်ရသေးတယ်… ။ အဲ့ဒီ ကောင်တာ ဘေးက ပိုက်ဆံရှင်းမလို့ ရပ်စောင့်နေတာ ရုံးက တယောက်ယောက်များမြင်သွားမလား ဆိုပြီးတောင် ရှက်မိတယ်… ဆယ်ကျော်သက်တွေ အများဆုံးလုပ်တဲ့ အလုပ်ပါ ….။
အမြင်ကျယ် တယ် ဆိုတာကို တလွဲဆံပင်ကောင်းကြတဲ့ လူငယ်တွေအတွက် ရင်လေးလွန်းပါတယ် (တလွဲအဓိပ္ပါယ် မကောက်နဲ့နော်) .. ခေတ် ရေစီးကြောင်း ဆိုတာကိုလဲ အဲဒီ လူငယ်တွေရဲ့ မိဘတွေ သုံးသပ်နေတာလဲ လွဲနေတယ် .. ငါ့သမီး ခေတ်မီတယ် လို့ ပြောရတာကို အရသာတွေ့နေတတ်တယ် .. ခေတ်မီမီ .. ဗိုက်ထွက်လာမှာကို ကြို မမြင်တတ်ဘူးလဲ ဖြစ်နေတယ် ..
အခုခေတ် လူငယ်တွေကို မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားခေါင်းဆောင်ကြီး ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့ မွေးနေ့ကို မေးကြည့်ရင် သိတဲ့သူ အတော်ရှားသွားပီ
ဒါပေမယ့် အနောက်တိုင်းက တင်သွင်းလာတဲ့
ဗယ်လင်တိုင်းဒေး Valentine Day လို့ ခေါ်တဲ့ ချစ်သူများနေ့ဆိုတာကြီးကိုတော့ ဘယ်သူ့မေးမေး သိနေတယ်ဗျာ….
ဗိုလ်ချုပ်ကို ဂုဏ်ပြုပြီး မြန်မာ့ကလေးများနေ့ သတ်မှတ်ထားတာ ရှိတယ်လေ…
အဲဒီနေ့ကို ဘယ်သူကမှ အရေးမလုပ်တော့ဘူးဗျာ
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းမွေးနေ့ ဖေဖေါ်ဝါရီလ (၁၃) ရက်နေ့
အဲဒီနေ့ကို နိုင်ငံကိုချစ်သူတွေ မမေ့သင့်တဲ့နေ့လို့ ယုံကြည်ပါတယ်….
အရင်ကတော့ ဒီဗယ်လင်တိုင်းဒေးဆိုတာကို ခေတ်မီတဲ့ပညာတတ်အသိုင်းအ၀ိုင်းမှလူများ
နှစ်သစ်ကူး ရော ဗယ်လင်တိုင်းရော မြန်မာလူငယ်များရဲ့ ယဉ်ကျေးမူ့ထဲကို
သူများ ဓလေ့ သူများယဉ်ကျေးမူ့ကို ကိုယ်လူတွေက သွားပါတ်သက်နေတယ်ဆိုတော့ သူများဓလေ့ထုံးစံ ယဉ်ကျေးမူ့ကိုတော့ ပစ်ပစ်ခါခါသွားပြောလို့တော့ မတင့်တယ်ပါဘူး။
ခုခေတ်လူငယ်တွေ မြန်မာ့သမိုင်းရဲ့ သိသင့်သိထိုက်တာတွေ ကို နီးစပ်ရာလူငယ်တွေကို
ဘယ်နှစ်ယောက်ကို ဘယ်နှစ်ကြိမ်လောက် ကိုယ့်ပါးစပ်ကနေ ပြောပြဘူးသလဲဆိုတာ ကို ပြန်စဉ်းစားမိပါသလား။
ကျနော်တို့ ခင်ဗျားတို့အားလုံး ခေတ်နဲ့ ခလေးတွေကို သာအပြစ်တင်ဘို့ မြင်မိနေတယ်
သူတို့ကို ကျနော်တို့ က သိသင့်သိထိုက်တာတွေကို ပြောပြရမယ့် တာဝန်ရှိတယ် ဆိုတာကိုတော့ မေ့နေကြပါတယ်။
သူတို့နားမထောင်ချင်ရင်တောင်မှာ ကိုယ်က စည်းရုံးပြီးပြောပြရမှာလေ။
ကဲအခုကစလို့ ကျနော်အပါအ၀င်ခင်ဗျားတို့အားလုံးနီးစပ်ရာ ကလေးတွေကိုသိသင့်သိထိုက်တာ ပြောပြဘို့ ကျနော်တို့ကိုယ်တိုင် ကြိုးစားကြည့်လိုက်ကြရအောင်ဗျာ………..
သမိုင်းဆရာကြီး ဒေါက်တာသန်းထွန်းပြောခဲ့သလိုပါပဲ သမိုင်းသင်တယ်ဆိုတာ မအ အောင်လို့ ဆိုတာ မှန်ပါတယ် အခုကလေးတွေ ဘာသာရပ်တွေခွဲလိုက်တော့ ဘယ်သူမှ စာအများကြီးကျက်ရမယ့် သမိုင်းကိုမယူချင်ကြပါဘူး ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် လူအထင်ကြီးအောင် သိပ္ပံတွဲလေးတော့ ယူလိုက်မယ်ဆိုတဲ့ လူကများပါတယ်။ ဒါနဲ့ပဲ သမိုင်းကပျောက် ပြီး လူအလေးတွေ ပေါလာပါတယ်။ နောက်ဆုံးတော့ ခုလို လွတ်လပ်ရေးရဲ့ဖခင် ဗိုလ်ချုပ်မွေးနေ့ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၃ ရက် ကို မသိပဲ နောက်မှ ဘယ်ကမှန်းတောင်မသိတဲ့ ဗယ်လင်တိုင်းရဲ့နေ့ကိုကျတော့ ၃ တန်းကလေးကအစ သိပြီး နှင်းဆီပန်းတွေ အရုပ်တွေနဲ့ အလုပ်ရှုပ်နေတော့ အနာဂတ်က ရင်မောစရာပဲဖြစ်လာပါတယ်။
သူ့တိုကို သူတို့ မြန်မာလိုရော မှတ်ရဲလားမသိဘူး။ လွတ်လပ်ရေးရတာ ဘယ်သူကြောင့်လဲ ။ ကျေးဇူးမသိတတ်တဲ့ အလကားဟာတွေ။
ဖေဖော်ဝါရီ ၁၄ ရက်ဆိုတာ မနေ့ကကျော်လွန်ခဲ့တဲ့ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၃ လောက် ဘယ်နေ့က မြန်မာလူမျိုးတွေအတွက် ပိုပြီးသတိရသင့်သလဲ….တော်တော်များများ မြန်မာလူငယ်တွေ ဖော်ဖော်ဝါရီ ၁၃ ဆိုတာဘာနေ့မှန်း မသိကြတော့ပါဘူး…၁၄ ဆိုတဲ့ နေ့ကိုအာရုံထားပြီး ပျော်မြူး ဖို့စဉ်းစားနေကြတာ ၀မ်းနည်းစရာကောင်းလှပါတယ်….DVB မှ အမ မသီတာပြောသွားတာ သတိထားမိလိုက်ပါတယ် ဖော်ဖော်ဝါရီ ၁၃ လား ၁၉ လား ဆိုတာတောင် မသိတဲ့လူငယ်တွေ ရှိနေတော့ အင်မတန်ဝမ်းနည်းဖို့ ကောင်းပါတယ်….
ကိုဟယ်ရီ ရေးသားထားတဲ့ စာသားလေးတွေကို သေချာဖတ်ရင်း ဗိုလ်ချုပ်ရဲ့မွေးနေ့ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၃ရက်နေ့ဟာ ၁၄ ရက်နေ့ထက် ဘယ်လောက်ကွာခြားတယ်ဆိုတာ မြန်မာလူမျိုးမှန်ရင် တန်ဖိုးထားနိုင်ကြပါစေလို့ ဆန္ဒပြုလိုက်ပါတယ်…
အခုခေတ် မြန်မာပြည်က လူငယ်အများစုဟာ ဖခင်ဗိုလ်ချုပ်ကို မေ့နေကြပါပြီ …
ဘာမဟုတ်တဲ့ ဗယ်လင်တိုင်းနေ့ဆိုတာကို …
သူတို့ ရင်ခုန်နေကြတယ် …
ကျနော့်အဖွားပြောသလိုပဲ ပြောလိုက်ချင်တော့တယ် ဂျပန်အဆင်း အင်္ဂလိပ်အတက်မှာ မွေးလာတဲ့ဟာလေးတွေဆို့တော့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ လွတ်လပ်ရေးဖခင်ကြီး ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းမွေးနေ့ကို ဘယ်သိကြတော့မလဲ သူတုိ့ပထွေးတွေဆီက ဆင်းသက်လာတဲ့ အစဉ်အလာတွေပဲသိကြတာပေါ့နော့် ခုရက်တွေအတွင်းတွေ့ မိတာအဲ့ဒီရောဂါက ကလေးတွေတင်မဟုတ်ဘူး လူကြီးတွေပါကူးစက်နေပီ ၁၃ရက်နေ့ကဘာနေ့လဲမေးတော့ယောင်ဝါးဖြစ်နေတယ် ၁၄ရက်နေ့ကျတော့ ငေါက်ခနဲ့ဘာနေ့ဆိုပီးပြောတယ်လေ တချို့ ကျတော့လဲ ကိုအာဂပြောသလို ၁၃ – ၁၉ မှားနေသေးတာ.. နရင်းကြီးပဲအုပ်ပစ်ချင်တယ် ဖေဖော်ဝါရီ ၁၃ရက်နေ့က ဗိုလ်ချုပ်မွေးနေ့လဲဖြစ်တယ် မွန်အမျိုးသားနေ့လဲဖြစ်ပါတယ်။